India: Nampihitsoka ireo mpandeha tao Kerala ny fiara-dalamby nosakanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2018 11:33 GMT
happy harthal 2 avy amin'i challiyan
Mampiseho ireo fiara fitaterana irate tao amin'ny garan'i Angamali ao amin'ny faritany atsimon'i India ao Kerala ny lahatsary manaraka nampidirin'ilay mpisera Youtube peshaku, tafahitsoka ry zareo noho ny karazana fihetsiketsehana manokana izay ampiatoan'ny mpiasa ny asany. Antsoina hoe Harthal (Hartal) ny zava-nitranga ary nanjary olana hatrany tao Kerala.
Tamin'ny 22 Febroary, nitaraina tao amin'ny Hartal the complementing factor of Kerala ny bilaogy praveennair:
Misy ny fahasamihafana eo amin'ny hartal, izay heverina fa tsy maherisetra, sy ny bandhs, rehefa azo tafihana ireo mpandrava fitokonana, araka ny fanazavan'ny tranonkala Harthal.com. Tamin'ny bilaogy hafa Hartal Watch, afaka mahafantatra ny toerana sy ny fotoana hanaovana ny Hartals manaraka ireo mpamaky.
Mampiseho tsy faharetana amin'ny fitokonana hafa indray ny lahatsoratry Kerala Views Kerala to be paralysed for the nth time [Mila ahitsoka fanintsivoaisa intsony i Kerala], ary manome antony hafa ho an'ny hartal manerana ny firenena:
Tsy misy olona afaka hiady hevitra amin'ny zon'ny mpiasa hanao fitokonana sy ny tantsaha hanohana hetsika tahaka izany. Na izany aza, misy ambadika politika ny fitokonana. Fisalasalana kely izay nokarakaraina amin'ny fifidianana Lok Sabha ho avy.
Azo vakiana ao amin'ny newindpress.com ny vaovao fanampiny momba ny fahavitrihana ambadiky ny fitokonana.